Moodooyinka cusub ee Mac ee bisha Oktoobar | Waxaan ka socdaa mac
Tani ma noqon doontaa bishii ay Apple cusbooneysiin doonto khadka Mac?
Dhamaanteen waxaan istaagnay inaan sugno Qeybtii ugu dambeysay ee a Hal ka badanLaakiin taasi kama soo bixin afka Tim Cook. Dhacdadii Sebtembar waxaa loo hibeeyay oo keliya iPhone-ka cusub iyo taxanaha Apple Watch ee la cusbooneysiiyay 4. Runtu waxay tahay haddii aan si qabow u fikirno, Tufaaxa ayaa hilib badan saaray dabka, inkasta oo ayna ku filnayn in badan.
Imaatinka cusub ee Apple Watch Series 4 oo leh teknoolojiyadda LTE ee Spain iyo suurtagalnimada in lagu sameeyo barnaamijyada elektrokoardyo ee waddammada sida Mareykanka oo kale, maahan wax iska caadi ah. Haddii aad ku darto tan inay soo bandhigeen isbeddelka iPhone X oo ay u gudbiyeen ID-ga wajiga dhammaan baaxadda leh iPhone XR, waxaan heysanaa jawi ku habboon Keynote in lagu xiro intaas uun.
Go'aanku waa fikradaha uu Apple doonayay inuu suuqa galiyo noocyo cusub oo iPad Pro ah oo leh Face ID ama cusbooneysiin dhameystiran oo ku saabsan qadka Mac. Mac waqti isku mid ah. Kuwa leh fursado badan oo dib loo cusbooneysiin karo waxay noqon doonaan Mac Pro iyo Mac mini, laakiin si sax ah ayey u yihiin MacBook Pro, 12-inch MacBook iyo iMacs waa si sax ah waxa dadweynaha guud ahaan sugayaan.
Dhawaan Apple waxay hagaajisay kumbuyuutarka MacBook Pro oo ah 13 inji, kana tagaya kuwa 15 sugaya. Shaki la'aan, waxay u muuqataa in qaabka 13-inji yahay midka ugu badan ee bixiyay dhibaatada dhibaatada habka balanbaalis ee furayaasha. Hadda, muddo ka dib iyo ka dib markii ay Apple soo saartay barnaamij dib-u-eegis loogu talagalay kumbuyuutarrada dhowr nooc oo ah nooca loo yaqaan 'MacBook', waa marka aan isweydiinno su'aasha. Apple ma soo bandhigi doontaa Macs cusub bisha Oktoobar?
Haddii aan runta kuu sheego, waa wax aad u macquul ah in Oktoobar 26, oo ah marka la filayo imaatinka iPhone XR cusub, waxay noqon doontaa marka Apple ay dhacdo dhacdo. Mar dambe ma hubin karno inay kaliya tahay Mac-yada cusub ama haddii ay sidoo kale ka faa'iideystaan ​​fursadda ah inay iPad Pro-ka cusub ku wareejiyaan si ay ugu diyaar garoobaan ololaha Kirismaska. Haddii aad sugeyso inaad iibsato Mac, waxaan kugula talinayaa ugu yaraan ha loo daayo bisha Oktoobar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Tani ma noqon doontaa bishii ay Apple cusbooneysiin doonto khadka Mac?